को हुन् ती बहादुर ? जसले महिला मन्त्रालयको गाडिभित्रै यौन क्रीयाकलाप गरे ? - लाल बिहानी
को हुन् ती बहादुर ? जसले महिला मन्त्रालयको गाडिभित्रै यौन क्रीयाकलाप गरे ?
२७ असार काडमाडौं । बुधबार रातिदेखि सनसनिपुर्ण तरिकाले एउटा समाचारले सामाजिक संजाल ततायो । खबर थियो `महिला मन्त्रालयको गाडीभित्र यौनजन्य क्रियाकलाप गर्दै गर्दा तीन जना पक्राउ´भन्ने शिर्षकमा । यो खबर सार्वजनिक भएसंगै सामाजिक संजालमा विभिन्न व्यक्तिहरुले आ-आफ्नो विचारहरु टिप्पणी गरे । कसैले हस्यौली पारामा जोक गरेर टिप्पणी गरे त कसैले सरकारी गाडिको दुरुपयोग भने । केही समय अगाडि मात्रै स्वयंम्भुमा सरकारी गाडी लगेर डेटिङ बसेको समाचार पनि यसैगरी भाइरल नै भएको थियो । त्यस्तै बुधबार रातिदेखि पनि यो समाचार भाइरल बन्यो ।
बुधबार राति ११ बजे सूर्यविनायक नगरपालिका-७ घ्याम्पेडाँडाको जङ्गलमा रोकिराखेको गाडीबाट यौन क्रीयाकलाप गर्दैगर्दा दुई पुरुष र एक महिला ‘रंगेहात’ पक्राउ परे । उनीहरूलाई प्रदेश ३-०१-००२ झ ५०५२ नम्बरको गाडीबाट प्रहरीले पक्राउ गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका अनुसार उनीहरुलाई गाडीभित्र निर्वस्त्र अवस्थामा देखेपछि सामान्य सोधपुछ गरेर नियन्त्रणमा लिइयो ।
कोको थिए गाडिभित्र ?
प्रहरीका अनुसार सवारीचालक सिन्धुपाल्चोकका ४१ वर्षीय जितबहादुर खत्री र गाडीमा सवार शम्भु कार्की र अर्की २१ वर्षीया महिला अस्मिता(परिवर्तित नाम) थिए । कार्की र अस्मिता गाडीभित्र अश्लील(यौन) क्रीयाकपाल गर्दैगर्दा प्रहरीले देखेका थि ।
प्रहरीले तिनै जनालाई पक्राउ गरिएको छ । भक्तपुरका डीएसपी दिपक गिरीका अनुसार उनीहरुविरुद्ध सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रियाकलाप गर्न नहुने कसूरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।